Coverall fiarovana / akanjo mitokana
Fanokafana akanjo vita amin'ny fantsom-pametahana hafanana
Saron'ny kiraro fanokanana azo ampiasaina
Akanjo miaro amin'ny fanoherana ny statika
Sarona fiarovana miaraka Aminy ...
Fiarovana ara-pitsaboana azo ampiasaina ...
Torolàlana momba ny fampiasana ny Protective Coverall Anaran'ny vokatra: Modely / famaritana modely fiarovana: Sarina takelaka iray, famaritana roa sosona: 160 (S), 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL ) Composition Structural Ity vokatra ity dia misy karazany roa: fonosana iray sy lamba firakotra roa, misy kapila, akanjo ary pataloha, misy fonosana elastika, kitrokely, kapila ary valahana, ary nozairina amina vava vava. Ny vokatra dia tsy steril, azo alefa ary nozairina tamin'ny PE film compos ...
Torolàlana momba ny fampiasana akanjo fitokana-monina azo alefa anarana: vokatra azo itokanana akanjo azo ampiasaina: SUREZEN maodely / famaritana maodely: SZ400 Loko manga, fomba azo avadika. Famaritana: S, M, L Structural Composition: Ny vokatra dia tsy steril, azo alefa ary nozairina tamin'ny sarimihetsika SMS 43% (15gms) mitambatra 57% lamba tsy tenona (20gms). 1. Bika aman'endrika: ny fisehoan'ny lamba manarona dia ho maina, madio ary tsy misy holatra. Tsy misy adhesion, triatra, lavaka ary lesoka hafa avela eny ambonin'ny. Ny stitch s ...
Coverall fiarovana amin'ny fantsom-pametahana hafanana
Torolàlana momba ny fampiasana fonosana fiarovana miaraka amin'ny kasety fametahana hafanana Anaran'ny vokatra: Sarona fiarovana miaraka amin'ny kasety fametahana hafanana Model / Famaritana maodely: Famaritana takelaka iray amin'ny takelaka: 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL ) Composition Structural Ity vokatra ity dia fonosana tokana, misy saron-doha, pataloha akanjo, ary fonosana kiraro misy cuff elastika, kitrokely, hood sy andilany ary nozairina tamin'ny zipper self-locking frontal. Ny famehezana dia hasiana tombo-kase amin'ny kasety fanaovana famehezana. Ny vokatra dia azo ampiasaina ...
Akanjo fanoherana ny statika
Ny vokatray dia manasongadina fahalalahan-tanana malalaka sy malefaka ao anaty tratra sy soroka, sisin-trandrika elastika hahazoana fampiononana miavaka, & tsiambaratelo miafina amin'ny valahana sy hatoka mba hahazoana antoka azo antoka. Ity akanjo manohitra static ity dia namboarina ho an'ny fampiasana, fahombiazana ary fikarakarana mora foana, na dia matavy na ratsy aza ilay asa. Ny kofehy vita amin'ny poly-landy maharitra sy miaina dia manohitra ny fahalavoana, ny ketrona ary ny tasy. Manamboatra T-shirt anti-static, palitao anti-static, akanjo ririnina anti-static vokatra hafa ampiasain'ny orinasa petrochemical ...
Ity vokatra ity dia mandray filtration telo sosona. Ny fizotry ny famokarana lehibe dia misy ny mitsonika mitsoka, spunbond, rivotra mafana na fanjaitra fanjaitra, sns., Izay misy ny fiadiana amin'ny tsiranoka, ny sivana amin'ny potika ary ny bakteria. Fepetahana feno, azo antoka ny vokatra, lamba telo-sosona menaka manelatselatra + ambaratonga fiarovana lamba tsy tenona no avo, avo ny asa sy ny sekoly, miambina hatrany, ny fomban'ny fahavaratra manokana, maivana sy mifoka rivotra, mifanaraka amin'ny tarehy, tsy malalaka, fanoherana ambany , tsy mitazona ny fofonaina, fehikibo sofina avo lenta, mahazo aina ary tsy manenjana ny sofina.
Ny saron-tava N95 dia iray amin'ireo saron-tava miaro zana-tany sivy voamarin'ny NIOSH. "N" dia midika hoe tsy mahatohitra menaka. Ny "95" dia midika fa rehefa tratry ny tsiranoka fanandramana manokana, ny fitrana sombiny ao anaty sarontava dia ambany kokoa noho ny 95% noho ny fifantohan'ny sombin-javatra ivelan'ny sarontava. Ny sandan'ny 95% dia tsy ny antonony fa ny kely indrindra. N95 dia tsy anaran'ny vokatra manokana. Raha mbola mahafeno ny fenitra N95 ary mandalo ny tsikera NIOSH, dia azo antsoina hoe "saron-tava N95". Ny haavon'ny fiarovana ny N95 dia midika fa eo ambanin'ny fepetra fanandramana voalaza ao amin'ny fenitra NIOSH, ny fahombiazan'ny sivana amin'ny fitaovana fanasiana sarontava amin'ny sombiny tsy misy menaka (toy ny vovoka, zavona asidra, zavona loko, zavamiaina bitika, sns.) Dia mahatratra 95%.
Ny sarontava miaro ny fitsaboana dia mety amin'ny fiarovana ny mpiasa ara-pitsaboana sy ny mpiasa mifandraika amin'izany amin'ny areti-mifindra avy amin'ny rivotra. Izy io dia karazana fanasivanan-tena manakaiky ny fitaovam-piarovana ara-pahasalamana miaraka amin'ny fiarovana avo lenta, mety indrindra amin'ny fihanaky ny rivotra mandritra ny fitiliana sy ny asa fitsaboana na rehefa ataon'ny marary voan'ny taovam-pisefoana miparitaka amin'ny vongan-drano eo akaiky eo, io ambaratonga io ny saron-tava dia afaka manivana sombintsombiny amin'ny rivotra ary manakana ireo loto toy ny rano mitete, ra, tsiranoka amin'ny vatana ary tsiambaratelo. Ny fahombiazan'ny filtration an'ny sombin-tsolika tsy misy menaka dia mety hahatratra 95 Ambony% dia mahatratra ny haavon'ny N95, izay fitaovana fiarovan-tena ampiasaina matetika amin'ny aretin'ny rivotra. Izy io dia mety tsara amin'ny endrik'ilay mpitafy ary vokatra ampiasaina indray mandeha. Ny sarontava miaro amin'ny fitsaboana dia afaka misoroka ny ankamaroan'ny pathogens toy ny bakteria sy ny virus. Ny WHO dia nanoro hevitra ny mpitsabo hampiasa sarontava miaro amin'ny zana-pitrandrahana mba hisorohana ny aretina mikraoba amin'ny rivotra hopitaly.
Ny saron-tava ara-pitsaboana azo araraotina dia ampiasaina hanakanana ny fery avy amin'ny lavaka am-bava sy ny lava-orona, ary azo ampiasaina amin'ny fikarakarana fahadiovana fanary amin'ny tontolo ara-pitsaboana mahazatra. Izy io dia mety amin'ny hetsika fikarakarana ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny, toy ny fanadiovana ny fahadiovana, fanomanana ranon-javatra, fanadiovana lambam-pandriana sns, na sakana na fiarovana ny sombiny hafa noho ny zavamiaina bitika toy ny vovobony.
Ity vokatra ity dia mampiasa sivana misy sosona telo, izay afaka manilika tsara ireo sombin-bakteria nefa tsy mitazona ny fofonainao ary manakana tsara ny setroka, ny vovobony ary ny vovoka. Fepetahana feno, azo antoka ny vokatra, lamba telo-sosona menaka manelatselatra + ambaratonga fiarovana lamba tsy tenona no avo, avo ny asa sy ny sekoly, miambina hatrany, ny fomban'ny fahavaratra manokana, maivana sy mifoka rivotra, mifanaraka amin'ny tarehy, tsy malalaka, fanoherana ambany , tsy mitazona ny fofonaina, fehikibo sofina avo lenta, mahazo aina ary tsy manenjana ny sofina.
Torolàlana momba ny fampiasana famaohana kiraro fanokanana azo ampiasaina: Anaran'ny vokatra azo: Manokana: (Karazan-tsarimihetsika tsy misy fantsom-panafenana hafanana), karazana fantsom-panafenana hafanana (Seams misy kasety fanaovana famehezana). Ny firafitry ny firafitry ny rafitra Ny vokatra dia tsy misy steril, azo alefa ary nozairina tamin'ny sarimihetsika PE tsy mitambatra lamba (fitaovana lehibe). Ho an'ny karazana fantsom-panafanana hafanana, ny tombo-kase dia hasiana tombo-kase amin'ny fantsom-panafenana hafanana, manana tanjaka avo sy fampisehoana sakana izy io. Vokatra P ...
Tena raisinay an-tanan-droa ireo antoko liana rehetra amin'ny orinasa mba samy hahazo tombony!